2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago -2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #307 by Dariussssss
1 ။ ဇွန်လ 12, 1972 (အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ် 96)
နောက်ဘက်ကုန်တင်တံခါးကိုရုတ်တရက်ချွတ်ချိုးဖဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ကြီး Bryce မက်ကော်မစ်လုံခြုံစွာလေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ခရီးသည်အဘယ်သူမျှမဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
2 ။ ဇွန်လ 24, 1982 (ဗြိတိန်လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်)
ဗိုလ်ကြီးရော်ဂျာ Greaves တောင်ပေါ်မှာ Galunggung ၏မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကနေမီးတောင်ပြာများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လေးယောက်စလုံးအင်ဂျင်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်လေယာဉ်ပျံအရူးအမူးကိုရှောင်ရှား။
3 ။ ဇူလိုင်လ 23, 1983 (Air ကိုကနေဒါလေယာဉ် 143)
ဗိုလ်ကြီးဘော့ Pearson အတွေ့အကြုံဟေုနျစီးရှေ့ပြေးအားလုံးအီလက်ထရောနစ်ပါဝါ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ့်ဆီဖြည့ miscalculation ပြီးနောက်လေယာဉ်ကိုလေယာဉ်ဆင်းသက်ခြင်းဖြင့်ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်မှာရှိသမျှ 61 ခရီးသည်ကယ်လွှတ်တော်မူ၏။
4 ။ ဧပြီလ 28, 1988 (Aloha လေကြောင်းလိုင်းပျံသန်းမှု 243)
ပေါက်ကွဲ decompress ခေါင်မိုး၏ကြီးမားသောအပိုင်းချွတ်ဆုတ်ပြီးနောက်လေယာဉ်မှူးရောဘတ် Schornstheimer 13 မိနစ်အတွင်းလေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ Clarabelle လန်စင်း, တစ်ဦးလေယာဉ်မယ်သူမ၏ထိုင်ခုံကနေသုတ်သင်ခံခဲ့ရသည်; အခြားအ 90 ခရီးသည်ဒဏ်ရာရမခံခဲ့ရပါ။
5 ။ ဇွန်လ 10, 1990 (ဗြိတိန်လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ် 5390)
co-ရှေ့ပြေး Alastair Atchison ဆိုးဆိုးရွားရွား-တပ်ဆင် windscreen panel ကပျက်ကွက်ပြီးနောက်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေတဲ့လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ကပ္ပတိန်က Tim Lancaster လေယာဉ်မှူးအခန်းထဲကတစ်ဝက်ကြီးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေယာဉ်မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး။
6 ။ ဇန်နဝါရီလ 17, 2008 (BA ပျံသန်းမှု 38)
7 ။ ဇန်နဝါရီလ 15, 2009 (အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ် 1549)
ဗိုလ်ကြီး Chesley Sullenberger III ကိုလေယာဉ်ကိုပိတ်ထားသည်ကနေဒါ Geese ၏သိုးစုပြီးနောက် Hudson မြစ်ပေါ်တွင်လုံခြုံစွာနေတဲ့လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။
8 ။ ဧပြီလ 13, 2010 (Cathay ပစိဖိတ်ပျံသန်းမှု 780)
လေယာဉ်မှူး Malcom ရေနှင့်ဒါဝိဒ် Hayho တွန်းကန်အားကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းပြီးနောက်မှာနီးပါးနှစ်ကြိမ်မြင့်အကြံပြုမြန်နှုန်းလေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။
9 ။ နိုဝင်ဘာလ 4, 2010 (Qantas တို့ပျံသန်းမှု)
အင်ဂျင်ကိုအရေအတွက်ကို 380 တစ်တောင်ပံမထိခိုက်စေကာလောင်စာဆီတိုင်ကီမီးဖြစ်စေတဲ့, ပေါက်ကွဲပြီးနောက်ဗိုလ်ကြီးရစ်ချတ်ချန်ပီယံက de Crespigny A2 လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်မှာရှိသမျှ 469 ခရီးသည်ကိုတောင်ထိခိုက်စေမခံခဲ့ရပါ။
10 ။ အဘယ်သူ၏လက်မောင်းကိုချွတ်ကျဆင်းအဆိုပါ Flybe ကပ္ပတိန်
ကျွန်တော်တစ်ဦးအနည်းငယ်ဟာသမှတ်စုအပေါ်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။ gusty အခြေအနေများအတွက်လေယာဉ်ဆင်းသက်မည်သည့်လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးအသေးအဖှဲအဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ခြေတုလက်တုလက်မောင်းရုံကိုချွတ်ကျဆင်းသွားသည့်အခါအဓိကလုပ်ရတဲ့ပါပဲ။ ဤသည် 2014 အတွက်တဦးတည်း Flybe ကပ္ပတိန်မှဖြစ်ပျက်အတိအကျဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီတွင် touchdown မီ, "သူ၏ခြေတုလက်တုကိုယ်လက်အင်္ဂါလေယာဉ်၏ထိန်းချုပ်မှုသူ့ကိုမှု, ထမ်းဘိုးကိုထမ်းညှပ်ထံမှ detach လုပ်လိုက်သောခဲ့သည်," တစ်ဦးလေကြောင်းမတော်တဆမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲအစီရင်ခံစာကဆိုသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့မဟုတ်, အဘယ်ကြောင့်မသိရပါဘူး ...
သြဂုတ်လ 24, 2001
Air ကို Transat ပျံသန်းမှု 236 သြဂုတ်လ 24, 2001 အပေါ်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုကျော်ပျံသန်းနေစဉ်အတွင်းအာဏာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းတိုရွန်တို, အွန်, ကနေဒါ, ကနေလစ္စဘွန်း, ပေါ်တူဂီဘို့ချည်နှောင်လျက်တစ်ဦးအရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဲယားဘတ်စ် A330 မလျော်ကန်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တစ်လောင်စာဆီယိုစိမ့်မှုကြောင့်ပြည့်စုံပါဝါဆုံးရှုံးမှုခံစားခဲ့ရသည်။ ဗိုလ်ကြီးရောဘတ်Piché, 48 တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရဟေုနျစီးလေယာဉ်မှူးများနှင့်ပထမဦးစွာအရာရှိ Dirk က de Jager, 28, ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်မှာရှိသမျှ 306 ကလူ (293 ခရီးသည်နှင့် 13 အမှုထမ်း) ချွေတာခြင်း, အာ့ဇိုရီစ်အတွက်အောင်မြင်သောအရေးပေါ်ဆင်းသက်ဖို့လေယာဉ်ကိုပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်တွင်ခရီးသည်အများစုမှာဥရောပနှင့်ပေါ်တူဂီအတွက်မိသားစုသွားရောက်ပြန်လာပေါ်တူဂီပြည်တော်ပြန်သွားရောက်လည်ပတ်ကနေဒါရှိကြ၏။ အကြောင်းကို 19 မိနစ်မှာတော့Pichéနှင့် De Jager နောက်ထပ်သမိုင်း၌မဆိုခရီးသည်တင်ဂျက်လေယာဉ်ထက်, (120 မိုင်) ပါဝါမပါဘဲအချို့ 75 ကီလိုမီတာသူတို့ရဲ့လေယာဉ်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ ယခင်စံချိန်ကိုလည်းနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား 1983 Gimli စက်မဲ့လေယာဉ်အဖြစ်အပျက်စဉ်အတွင်း, ကနေဒါလေယာဉ်မှူးများကသတ်မှတ်ထားခဲ့
မေလ 24, 1988
TACA ပျံသန်းမှု 110 ဘေလီဇ်ကနေ New Orleans ဖို့ခရီးသွားလာ, TACA လေကြောင်းလိုင်းအားဖြင့် operated အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီစဉ်လေကြောင်းလိုင်းပျံသန်းခဲ့သည်။ မေလ 24, 1988 တွင်ဘိုးအင်း 737-300 နှစ်ဦးစလုံးအင်ဂျင်ပါဝါကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့်သူ့ရဲ့လေယာဉ်မှူးအသေးစားဒဏ်ရာထက်ပိုမိုတည်တံ့ခိုင်မြဲသင်္ဘောအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူတစ်မြက် levee အပေါ်အောင်မြင်သော deadstick ဆင်းသက်စေခဲ့သည်။ လေယာဉ်, အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၏ကားလို့စ် Dardano ၏ကပ္ပတိန်အခြိနျမှာပြည်တွင်းစစ်လျှက်ခဲ့သောအယ်လ်ဆာဗေးဒေါမှသေးငယ်တဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အပေါ် crossfire မှတဦးတည်းမျက်စိဆုံးရှုံးခဲ့ရလေသည်။
source: အဆိုပါ Aviation, ဝီကီပီးဒီးယား
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း 11 months ago နေဖြင့် Dariussssss.
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago -2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #309 by Colonelwing
AIT-Transat ကနေဒီထဲကကြီးမားတဲ့ဇာတ်လမ်း ,, Cpt ရောဘတ်Pichéစေခြင်းငှါမငါ perso သူ့ကိုငါသိ၏။
Air ကို-Transat အပေါ်တစ်ဦးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုယူပြီးနေစဉ်။
ဟုတ်ကဲ့ ,, သေးငယ်တဲ့သင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံပြောနိုင်မယ်ဆိုရင် ... လေကြောင်းဆိုင်ရာသေးငယ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးပါ!
Empty Air ကို Transat 236 တွင်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးပျံ
သူတို့ကအစမိမိအသက် & ပျံသန်း AirTransat 236 တစ်ရုပ်ရှင်ထုတ်ဝေသည်။
တကယ့်ဇာတ်လမ်းအခြေစိုက်စခန်းအပေါ်က de ရုပ်ရှင်ခံစားပါ။
un ရုပ်ရှင် qui Illustrator la က de bord du vol AirTransat 236 ရောဘတ်piché du Commandant တု။
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #311 by Dariussssss
ငါ add တပိုရှိသည်အကြောင်းကြောင့်ငါဖြစ်ကောင်း, '' Amazing ဆင်းသက် '' သို့ဤခေါင်းစဉ်ကိုအမည်ပြောင်းမည်:
ဇန်နဝါရီလ 16, 2002
Garuda အင်ဒိုနီးရှားလေယာဉ် 421 Yogyakarta မှ Ampenan ထံမှ 625 ကီလိုမီတာ (388 မိုင်) အကြောင်းကိုခရီးသွားလာအင်ဒိုနီးရှားအလံသယ်ဆောင် Garuda အင်ဒိုနီးရှားတို့က operated တစ်စီစဉ်ထားပြည်တွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ 16, 2002 တွင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်၎င်း၏ဦးတည်ရာမှချဉ်းကပ်ကာလအတွင်းအကြီးအကျယ်မိုးကြိုးပစ်လှုပ်ရှားမှုကြုံတွေ့နှစ်ဦးစလုံးအင်ဂျင် flameout ခံစားခဲ့ရနှင့်တဦးတည်းသေဆုံးမှုများနှင့်အများအပြားဒဏ်ရာအတွက်ရရှိလာတဲ့တစ်ဦးရေတိမ်ပိုင်းမြစ်အတွင်းကပြေး။ လေယာဉ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8,000 ပေ (2,400 မီတာ) မှာမိုဃ်းတိမ်ကိုစီး၏အောက်ပိုင်းအလွှာမှတစ်ဆင့်ဆင်းသက်တော်မူသည်အတိုင်း, လေယာဉ်မှူးများ Bengawan တစ်ကိုယ်တော်မြစ်မြင်ပြန်ရုပ်သိမ်းပုခတ်နဲ့ဂီယာနှင့်အတူမြစ်အတွက်နည်းများအနည်းငယ်ခြားနားကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမြောင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆိုပါယာဉ်ကိုယ်ထည်, အတောင်ပံနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်များအကြီးအကျယ်နဂိုအတိုင်းနှင့်တကွ, ရေတိမ်ပိုင်းရေအတွက်၎င်း၏ဗိုက်အပေါ်ကဆင်းအခြေချနေထိုင်လေယာဉ်ထွက်ခွာအောင်မြင်ခဲ့သည်။ မီးကိုမရှိခဲ့သည်။
Colonelwing, သင်သည်နောက်တဖန်ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျှင်, ဒီမှာပန်ကာတယ်ရဲ့သူ့ကိုပြောပြပါ။ သူကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကြောင့်အရှုံးမပေးဖို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုမေ့လျော့ငါ့ကိုမှုတ်သွင်း။ ထိုအ yeah, အမှန်ပင်သေးငယ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကို။
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago -2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #313 by Colonelwing
အရှုံးမပေးသို့မဟုတ်သင့်လက်နက်ချကြကုန်အံ့ ,, အမြဲအဖြေတစ်ခုအဖြစ်တိုင်းပြဿနာများကိုသို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုကို ,, ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ဘယ်တော့မှမ!
သင့်ရဲ့ Rikoooo @ ဒီမှာကောင်းသောအလုပ်လုပ်နေတာ ,, သတိရပါ!
0.253 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်